Ukupholisa iwayini Abavelisi-iTshayina iwayini epholileyo ababoneleli kunye neFektri
Iiplastikhi zewayini epholileyo iingxowa zomkhono weebhotile zewayini
Ngokubanzi: uyilo lokubamba i-champagne, iwayini emhlophe, iwayini evukayo, ibhiya kunye nezinye iziselo, ezilungele ipati, ipikniki, i-BBQ, umbhiyozo, ukufudumala indlu kunye nemisebenzi engaphandle
Beka i-chiller yebhotile ye-champagne kwisikhenkcezisi malunga neeyure ezi-2, kwaye utyibilike emkhonweni ukuze upholise iziselo ngokukhawuleza kwaye uzigcine upholile kangangeeyure. Ukufezekisa ukusetyenziswa kwewayini, ibhiya, i-Champaign, njl.
EPHATHEKAYO NOKUQHELEKILEYO - Le sleeve ipholileyo yewayini ilula, ihambelana kwaye ilungele. Yisa nje kwipikiniki, ngaselunxwemeni, enkampini, okanye nakweyiphi na iminyhadala ukonwaba kwaye uphumle neziselo ezibandayo ngaphandle kwebhakethi lomkhenkce.
KULULA UKUSETYENZISWA – Beka i-chiller yebhotile ye-champagne kwisikhenkcezisi malunga neeyure ezi-2, kwaye utyibilike emkhonweni ukuze ubande iziselo ngokukhawuleza kwaye uzigcine ubanda kangangeeyure. Ukufezekisa ukusetyenziswa kwewayini, ibhiya, iChampagne, njl njl. Ubungakanani bemveliso: 6.1 x 9.25 Inch